ETU IBUDATA VIDIYO SITE NA TWITTER - TWITTER - 2019
Iji zụta egwuregwu na Steam, naanị ị ga-achọ ịnweta obere akpa nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ma ọ bụ kaadị akụ. Ma gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na anaghị azụta egwuregwu ahụ? Njehie ahụ nwere ike ime na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti wepụtara site na iji ihe nchọgharị ọ bụla, na ahịa ahịa Steam. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-eche nsogbu a n'oge ahịa Valve n'oge. Ka anyị leba anya n'ihe ndị kpatara na ọ na-emekarị ka a zụọ ihe egwuregwu.
Enweghị m ike ịzụta egwuregwu na Steam
O doro anya na onye ọ bụla Steam ọrụ ọ dịkarịa ala otu ugboro, ma na-eche na njehie ọrụ. Ma ndudue nke ime ugwo bu otu n'ime nsogbu ndi na-adighi nma, ebe obu na o siri ike ichoputa ihe kpatara ya. N'okpuru ebe a, anyị na-atụle ọnọdụ ndị na-emekarị, nakwa nyochaa otu esi edozi nsogbu ahụ.
Usoro 1: Melite faịlụ ndị ahịa
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịzụta ahịa na onye ahịa, mgbe ahụ, ụfọdụ n'ime faịlụ ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ ziri ezi nwere ike mebiri. Onye ọ bụla maara na Steam adịghị ama site na nkwụsi ike na ọrụ dị mma. Ya mere, ndị mmepe na-anwa idozi ọnọdụ ahụ ma na-agbalị ịkwụsị mmelite ozugbo ha chọtara ahụhụ. Na otu n'ime mmelite ndị a, enwere ike ịmepụta nrụrụ. Ọzọkwa, njehie nwere ike ime ma ọ bụrụ na melite maka ihe ụfọdụ enweghị ike imezue. Nke kachasị njọ bụ iji tinye nje virus ahụ.
Na nke a, ị ghaghị ịpụ ngwa ma gaa na nchekwa ebe ọ na-arụ ọrụ. Site na ndabara, a pụrụ ịchọta Steam n'akụkụ ụzọ a:
C: Steam usoro ihe omume.
Hichapụ ọdịnaya niile nke nchekwa a ma e wezụga faịlụ. Steam.exe na nchekwa steamapps . Biko mara na usoro a agaghị emetụta egwuregwu ndị arụnyere na kọmputa gị.
Echefula ilele usoro maka nje site na iji antivirus amara.
Usoro 2: Jiri ihe nchọgharị dị iche
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nke Google Chrome, Opera (na ikekwe ihe nchọgharị ndị ọzọ Chromium) nwere ọhụụ a. Ihe kpatara nke a nwere ike ịme ntọala ntọala DNS (Error 105), njehie cache, ma ọ bụ kuki. Nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka nsonaazụ nke ngwanrọ netwọk, na-etinye mgbakwunye ihe nchọgharị ma ọ bụ, ọzọ, na-etinye usoro ahụ ọkụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ n'ime ihe nchọgharị ị na-eme, ịkwesịrị ịgụ isiokwu ndị a ma soro ntuziaka ndị enyere na ha:
Otu esi hazie ohere na sava DNS na kọmputa gị
Otu esi ehicha kuki na Google Chrome
Esi kpochapụ cache na nchọgharị Google Chrome
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịghọta ihe kpatara nsogbu ahụ, gbalịa ịzụta egwuregwu ahụ site na iji ihe nchọgharị ọzọ. O yikarịrị ka ị ga-enwe ike ịzụta ihe Internet Explorer 7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ebe Steam na-arụ ọrụ na Internet Explorer engine. I nwekwara ike gbalịa iji Mozilla Firefox.
Mgbe ahụ, gaa na adreesị dị n'okpuru, ebe ị nwere ike ịzụta egwuregwu ahụ kpọmkwem site na ụlọ ahịa na saịtị Steam.
Zụrụ egwuregwu ahụ na ebe nrụọrụ weebụ na Steam
Nzọụkwụ 3: Gbanwee usoro ịkwụ ụgwọ
Ọtụtụ mgbe, nsogbu a mere mgbe ị na-agbalị ịkwụ ụgwọ maka egwuregwu ahụ na kaadị akwụmụgwọ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi arụmọrụ na-arụ n'ụlọ akụ gị. Hụ na ego zuru oke na akaụntụ gị ma ha na otu ego ahụ dịka ọnụahịa nke egwuregwu ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji kaadị akụ, mgbe ahụ dị nnọọ ịgbanwe usoro ịkwụ ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, nyefee ego na obere akpa Steam, ma ọ bụ ọrụ ịkwụ ụgwọ ọ bụla ọzọ nke na-akwado Steam. Ma ọ bụrụ na ego gị dị na obere akpa (QIWI, WebMoney, wdg), mgbe ahụ, ị ​​ga-akpọtụrụ nkwado nkwado nke ọrụ a.
Usoro 4: Naanị chere
Ọzọkwa, nsogbu nwere ike ime n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ na ihe nkesa ahụ. Karịsịa mgbe nke a na-eme n'oge ahịa oge, mgbe onye ọ bụla na-eme ngwa ịzụta egwuregwu dị ọnụ ala maka onwe ha. Nnukwu ego na-enyefe na ọtụtụ nde ndị ọrụ nwere ike itinye ihe nkesa.
Naanị chere ruo mgbe ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ kwụsịrị, sava ahụ na-alaghachikwa n'ọrụ nkịtị. Mgbe ahụ ịnwere ike ịzụta ihe dị mfe. Ọtụtụ mgbe 2-3 awa Steam restores ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị chọghị ichere, ịnwere ike ịzụta egwuregwu ugboro ugboro, ruo mgbe arụchara ọrụ ahụ nke ọma.
Usoro 5: Kpọghe akaụntụ gị
AntiFraud na-arụ ọrụ na usoro ọ bụla ebe a na-enyefe ego ọ bụla. Ihe kachasị mkpa ọ na-arụ bụ ịkọpụta ụdị ọnyà aghụghọ, ya bụ, ihe gbasara nke a bụ na ọ bụ iwu na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na AntiFraud kpebiri na ị bụ onye na-awakpo gị, a ga-egbochi gị ma ị gaghị enwe ike ịzụta egwuregwu.
Ihe kpatara igbochi AntiFrodom:
Jiri kaadị ugboro 3 n'ime minit 15;
Enweghị njikọ ekwentị;
Ógbè oge na-abụghị ọkọlọtọ;
E depụtara map ahụ na usoro nhazi "black list" system;
Nkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-adịghị na mba ebe akwụyere kaadị ego nke onye akwụ ụgwọ.
Nanị nkwado ntanetị nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu a. Kpọtụrụ ya maka enyemaka ma kọwaa nsogbu gị n'ụzọ zuru ezu, na-enye ihe niile dị mkpa: screenshots, aha njirimara na ozi msinfo, ihe akaebe nke ịzụta, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, nkwado ga-azaghachi na awa 2 ọzọ wee kpọghee akaụntụ gị. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ejighi egbochi ihe ahụ, ga-enye ntụziaka ndị dị mkpa.
Jụọ ajụjụ nkà na ụzụ Steam
Nzọụkwụ 6: Nyere enyi gị aka
Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ adịghị na mpaghara gị ma ọ bụ na ịchọrọ ichere maka nkwado akaaka ịzaghachi, ị nwere ike ịkpọtụrụ enyi maka enyemaka. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịzụta ihe, rịọ enyi ya ka o zitere gị egwuregwu dịka onyinye. Echefula ịlaghachi ego a enyi gị.
Anyị nwere olileanya na ọ dịkarịa ala otu n'ime ụzọ ndị a enyerela gị aka idozi nsogbu a. Ọ bụrụ na ịnweghi ike ịzụta egwuregwu ahụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enyerịta nkwado Nkwado Steam.